Akwụkwala ego karịrị euro iri asatọ maka SNES Classic, Nintendo gwara gị | Akụkọ akụrụngwa
Ihe omumu nke NES aburula ihe ndi chikotara nke di n'aka ndi oru pere mpe karia ka ha gaara acho. O doro anya na Nintendo echeghị echiche dị elu nke ngwaahịa a nwere ike inwe mgbe mmepụta malitere na Ihe o choro nwere karie ihe ndi mmadu choro.
Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, ọ malitere ngwaahịa a dabere na ihe ịga nke ọma nke ụfọdụ ngwaahịa ndị yiri ya, ma Nintendo bụ Nintendo, na ahịa nke kpochapụwo a elu. Companylọ ọrụ Japan na-arụ ọrụ ịmalite ụdị SNES Classic mana ọ chọghị ka otu ihe mee na nke gara aga.
Iji gbalịa izere otu ihe ahụ na-eme, ụlọ ọrụ ahụ na-eme atụmatụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nkeji iji gbalịa na ọ dịghị onye ga-aga resale ma ọ bụ gbaa ahịa ma kwụọ ụgwọ karịa ihe ọ na-efu. Dabere na NintendoAmerica President Reggie Filis-Aimé, nsogbu a agaghị eme ọzọ. Ọ gara n'ihu kwuo na "Ikwesighi ịkwụ ụgwọ karịa $ 80 maka ya."
Kemgbe ekwuputara mwepụta nke ihe mgbagharị ọhụụ a, ụfọdụ ụlọ ahịa na-echekwa ndagide, ọtụtụ n'ime ha mere site na bots, na-amanye ha kagbuo ndokwa nile nke emegoro ugbu a.
Reggie na-ekwu na ụlọ ọrụ ahụ na-eme ihe niile enwere ike na igwe na-emepụta nke mere ọ dịghị onye ọrụ ga-emechu ihu n'oge ekeresimesi a n'ihi enweghị ike inweta SNES Classic. Na mbu, igwe mmeputa ekwesighi inwe nsogbu iji nwee ike imeputa uzo zuru oke, ebe obu na ihe ndi di nkpa adighi oke oke ma nwekwaa uzo zuru ezu n’ahia iji mezuo ya, ihe di iche nke n’enyeghi Nintendo Switch.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Akwụla ụgwọ karịa euro 80 maka SNES Classic, Nintendo gwara gị